Ny fanalefahana ny famerana ny Cayman Brac izay misy ny fanonganana ny curfew rehetra, mamela ny jono sy ny sambo an'io hariva io, ny alakamisy 7 mey 2020 no anisan'ny nisongadinan'ny mpitondra ny Nosy Cayman tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany.
Ary eo an-dàlana ihany koa ny governemanta mba handray fepetra hanala an'i Cayman amin'ny lisitr'ireo ivon-toerana ara-bola ao amin'ny EU.
Ankoatr'izay, ny seranam-piaramanidin'i Cayman Islands sy ny seranan-tsambo ho an'ny sambo fitsangantsanganana dia hakatona hatramin'ny 1 septambra 2020 ho an'ny mpitsidika sy ny olona hiverina, araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny kabinetra androany. Hatao ny fanavakavahana ho an'ny serivisy tena ilaina, ny vonjy taitra ary ny fandraisana ireo vonjy taitra vonjimaika karakarain'ny Biraon'ny Governora.
Notarihin'ny Eveka Dr. Desmond Whittaker ny vavaka.
Valiny ratsy 74 no voalaza androany; roa tsara, ny iray amin'izy ireo dia manana tantaram-pitetezana, ary ny iray mifandray amin'ny tranga teo aloha. Amin'ireo fitambaram-bokatra miisa 80, 9 ny isan'ny olona mitondra soritr'aretina, olona 33 no tsy simptomatika ary 35 no miverina. 2. Ny isan'ny hopitaly dia mitoetra ho XNUMX.
Ny fanandramana ny ankamaroan'ny mpiasan'ny fitsaboana dia natao tamin'ny dingana voalohany ary mitohy miaraka amin'ny dingana faharoa izay ahitana: supermarket, RCIPS, Fire, olona ao amin'ny Little Cayman ary Cayman Brac.
Amin'ny dingana faha-3 amin'ny fitsapana, ny santionany miverimberina amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana dia hitohy mandritra ny fotoana maharitra, satria mpiasa tena ilaina izy ireo ary tsy maintsy mijanona afaka Covid-19. Ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mameno ny taratasy fangatahana isan'andro ary ahafahany manao fitiliana ara-pahasalamana isan'andro.
Nampahatsiahy ny rehetra izy fa hanaraka ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fepetra fisorohana COVID-19 hafa, toy ny fanasan-tanana, ary ny fanakonana tarehy. Ny sasany amin'ireny dia tolo-kevitra avy amin'ny CMO mifototra amin'ny fanao tsara indrindra iraisam-pirenena ary misy ny lalàna.
Kaomiseran'ny polisy, Andriamatoa Derek Byrne nitatitra:
Heloka kely vitsivitsy no niseho.
Ny fifandonana teo amin'ny andian-jiolahy tao amin'ny distrikan'ny polisy West Bay dia niafara tamin'ny fitifirana. Tsy nisy ny olona naratra. Fanafihana mahery vaika tamin'ity maraina ity izay nahitana antsy machete iray no naratra mafy tamin'ny tanana ary nampidirina hopitaly ary notanana am-ponja olona iray. Mandeha tsara ny fanadihadiana amin'ny lafiny roa, miaraka amin'ny iray voatazona ary voasambotra hatreto.
Mbola mandeha tsara ny «curfew» sarotra. Nofoanana tao Little Cayman tamin'ity herinandro ity ary ny ora tsy azo ihodivirana amin'ny fetin'ny Alahady tao Cayman Brac androany.
Manahy ny amin'ny fampiasana curfew malefaka amin'ny ankapobeny, raha toa ka mandeha tsara ny serivisy ilaina toy ny supermarket, banky, fivarotam-panafody, famindrana vola.
Nisy 481 ny fampitandremana tsirairay momba ny fanenjehana hatramin'ny 6 maraina maraina; amin'ireo dia 298 no an'ny curfew mafy, 184 ho an'ny curfew malefaka ary 110 ny tapakila navoaka ho an'ny curfew malefaka. Raha mila statistika feno dia jereo ny sidebar etsy ambany.
Ny fampiharana lalàna henjana kokoa dia ho tonga amin'ny Grand Cayman amin'ity faran'ny herinandro ity. Ny ahiahin'ny isan'ny fiara ao amin'ny araben'i Grand Cayman ankehitriny dia miahiahy ihany koa, ary ny fandehanana mafy, izay tsy misy fanakanana ary hanara-maso akaiky izany ny polisy.
Ny curfew malefaka ho an'ny Cayman Brac dia novaina nanomboka tamin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 8 alina, tontolo herinandro.
Mbola mandaitra tanteraka ny tsy fahazoana mivezivezy amoron-dranomasina ao amin'ny Grand Cayman.
Mampatahotra ny famerenantsika olona 6,000 eo amin'ny sehatry ny asa ary niteraka fitomboan'ny fifamoivoizana izany. Tena olana lehibe ny hafainganana. Miaraka amina olona marobe izay manao fanatanjahan-tena dia niantso ny mpamily izy mba hitandrina mba tsy hanaitaitra azy ireo na handratra azy ireo.
Niantso ny mpitaingina bisikileta izy handroaka ny lafiny ankavia ny làlana izay midika fa manaraka ny fivezivezin'ny fifamoivoizana. Ny fanoherana ny fivezivezena amin'ny sisiny ankavanan'ny làlana dia fomba iray izay mampidi-doza ireo mpitaingina bisikileta avy amin'ny olona mivoaka amin'ny lalamben'izy ireo mankany amin'ny fifamoivoizana mahazatra.
Ny kabinetra dia nandany lalàna nohavaozina mifehy ny tsy fahazoana mivoaka malefaka ao amin'ny Cayman Brac.
Ny Cayman Brac dia nidina hatramin'ny famotehana COVID-19 haavo 3, Little Cayman manakaiky ny haavo 2, ary i Grand Cayman kosa mijanona amin'ny ambaratonga 4.
On Cayman Brac, manomboka amin'ity faran'ny herinandro ity, nesorina ny fanidiana ny alahady ho an'ny Cayman Brac ary ny fanovana tsy azo ihodivirana mafy dia novaina tao 8 hariva-5 maraina, 7 andro isan-kerinandro. Nesorina ny curfew amoron-dranomasina anio hariva, izay ahafahan'ny roa manjono amin'ny sambo sy ny jono an-tsambo avy any ironshore. Ferana olona roa isaky ny sambo mpanjono.
Na izany aza, ny olona amin'ny toerana ampahibemaso dia takiana mba hitazomana ireo protokolota lavitra. Mbola voafetra ihany koa ny famerana ny fitsidihana toeram-pitsaboana.
Ny fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana dia voafetra ho an'ny faritra ivelany ihany, midika izany fa tsy azo atao ny misakafo ao anatiny. Amin'ny fivoriana ara-tsosialy avela, olona 25 no mety mivory.
Ny fialan-tsasatra, ny fialam-boly, ny finoana, ny klioban'ny serivisy, ny vondrom-piarahamonina ary ny sivika dia mety hanao fivoriana ankehitriny kanefa tsy maintsy mitazona ny fepetra lavitra amin'ny fiaraha-monina.
Maska no takiana ao an-trano amin'ny toerana ampahibemaso ary ilaina ny fitazonana ny halaviran'ny 6 metatra.
Mitohy ny fanaraha-maso ny dia an-tanety. Ny fitsangatsanganana dia avela aorian'ny fampandrenesana ny mpiasan'ny fahasalamana momba ny fahasalamana sy ny fahasalamam-bahoaka Cayman Brac.
Ny bara dia hikatona mandra-pahatongan'ny 50% amin'ny fanandramana ho ratsy na ho lany daty amin'ny fitsipika vaovao, izay haingana kokoa. Hitohy ny fitsapana.
Hitohy hiasa lavitra ny Serivisy sivily.
Mitohy ao Cayman Brac ny fameperana ny fitsidihana trano fandraisam-bahiny fonenana.
Ny governemanta dia manohy miasa na dia mandritra ny krizy COVID-19 aza mba hahazoana antoka fa ny Nosy Cayman dia hivoaka amin'ny lisitra mainty eropeana amin'ny Oktobra. Ny LA dia tokony hivory amin'ny faran'ity volana ity handaniana volavolan-dalàna maromaro momba an'io.
Hanatrika valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny Minisitry ny Vola mba hanavao ny toe-draharaha ara-bola any amin'ny Nosy Cayman.
Mitohy tsara ny asan'ny departemanta momba ny fahazoan-dàlana sy ny mpamily (DVDL); fiara 275 eo ho eo no havaozina isan'andro. Ary koa, ny mpiasan'ny National Roads Authority (NRA) dia miverina miasa amin'ny arabe.
Nanazava izy fa ny tennis dia azon'ny tompon-trano an-kianja filalaovana tenisy miaraka amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviany. Tsy ekena ny tenisy amin'ny fananana strata na toerana ho an'ny daholobe.
Premier debunked as "diso tanteraka" tsaho fa ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena dia manome solosaina finday maimaimpoana ho an'ny tanora. Nanamafy izy fa ny loharanom-baovao azo antoka azo antoka dia ny CIGTV ofisialy, Radio Cayman ary ny Facebook sy Twitter an'ny governemanta.
Ny dingana manaraka dia mety hamela ny garazy fiara sy ny fivarotana ampahany hisokatra.
Raha mila fampandrenesana misimisy kokoa avy amin'ny Premier dia jereo ny sidebars etsy ambany.
Ny governora dia nangataka ny rehetra hanaraka ny ora tsy hitsaharana amin'ny anaran'ny rehetra ao amin'ny fiarahamonina.
Nandray ny vaovao tsara momba an'i Cayman Brac izy.
Nomarihiny fa na izany aza, ny ara-dalàna vaovao dia mitaky ny fanalavirana ara-tsosialy sy ny fidiovana ary ny fidiovana fototra.
Natoky izy fa ny drafitra fanamaivanana ny fameperana an'i Grand Cayman dia mbola mitohy hatrany.
Mandra-pisian'ny vaksinina na ahafahanay mitsapa olona, ​​dia tsy azo atao ny manao fitsangatsanganana iraisam-pirenena. Ary mbola lavitra ny vaksinina - omena fitsapana haingana izao tontolo izao saingy amin'izao fotoana izao dia tsy ankatoavina ny rehetra ary tsy manolotra làlana mankany aloha. Fantany fa miahiahy ny amin'ny hanidiana ny sisintany mandritra ny telo na efa-bolana manaraka ny olona.
Ny sidina Repoblika Dominikanina dia voamarina amin'ny 17 Mey. Tsy ilaina ny miantso satria hanamafy ny antsipirian'ny famandrihana izy rahampitso.
Ny sidina iray hafa mankany Miami dia voamarina fa ny datin'ny sidina dia hamafisina.
Ny sidina mankany Canada dia amin'ny 22 Mey ary misy toerana mbola misy; azo jerena ao amin'ny tranonkalany sosialy. Tsy misy sidina lavitra mankany Canada noeritreretina mialoha.
Naneho ny heviny ny governora fa mandritra ny dia an-habakabaka dia tsy ho azo atao ny manalavitra ny fiaraha-monina ary ny sidina voalamina dia fanalana vonjy maika.
Ny minisitry ny fahasalamana Hon. Dwayne Seymour nanao hoe:
Ireo olona mahatsapa fa mila miatrika dia afaka mifandray amin'ny fanampiana ara-pahasalamana amin'ny 1-800-534-MIND (6463).
Nilaza izy fa ny sarontava dia nozaraina tamin'ny MLA rehetra mba haparitaka any amin'ny distrika misy azy ireo ary maro hafa no nasaina. Iray ihany io teo amin'ireo fepetra marobe teo amin'ny fiarahamonina ho an'ny sarontava. Nisy ihany koa ireo fikambanana toa ny Cross Red Cross nanaparitaka azy ireo.
Nisaotra an'i BritCay izy tamin'ny fanomezana $ 20,000 ho an'ny fiara iray ho an'ny fivarotam-panafody HSA hanaterana fanafody any amin'ireo marefo sy antitra. Ho an'ny fandrindrana ny fandefasana, ny isa hiantsoana dia 244-2715 na 244-2716.
Nisaotra ny BritCay ihany koa izy tamin'ny nanolorany kilalao golf ho an'ny fampiasana ny kilema golf.
Nangataka tamin'ny olona izy mba haneho firaisankina amin'ireo protocole napetraka ho tombontsoan'ny Nosy amin'ny alàlan'ny fanaovana sarontava na raha tsy misy na dia bandana aza.
Lefitra praiminisitra, Hon. Moses Kirkconnell nanao hoe:
Ny seranan-tsambo sy ny seranam-piaramanidina dia vonona hisokatra amin'ny 1 septambra izao mifototra amin'ny taratasy kabinetra vao lany. Tsy misy antoka fa hisokatra amin'ireo sambo fitsangantsanganana ireo seranana amin'ny telovolana fahatelo na fahefatra.
Mametraka drafitra maharitra ho an'ny fizahantany ny governemanta. Fonosana fandrisihana COVID-19 hiteraka fanentanana miaraka amin'ny programa fanabeazana hanatsarana ny fahaiza-manao mba hahazoana antoka fa afaka manararaotra fotoana vaovao ny Caymanians rehefa misy izy ireo.
Raha tsy eo intsony ny 90% -n'ny fizahan-tany dia fomba vaovao fanaovana raharaham-barotra fa tsy fanamboarana haingana no fomba handrosoana mifandraika amin'ny fizahan-tany. Ny fitifirana ny mizana marina no lakileny. "Any am-paran'ny fianjerana malalaka ny indostria ary manomboka manangana azy io indray isika."
Ny serivisy sy ny fananganana ara-bola dia mavitrika sy matanjaka ary tokony hitohy izany. Tsy maintsy miverina amin'ny laoniny ny fizahantany.
Fomba iray handehanana ny toeram-ponenana eo amin'ny nosy sy ny asa tsara kokoa ho an'ny trano fisakafoanana eo an-toerana. Tsy afaka sitrana ireo tonga iraisam-pirenena raha tsy tafarina ny tontolo manodidina ny Nosy Cayman. Ny governemanta dia mifampiresaka momba ny fotoana hisokafany amin'ny fizahan-tany eo amin'ny nosy.
Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Hon. Juliana, O'Connor-Connolly nilaza hoe:
Nasongadin'ny minisitra fa faly ny olona tao amin'ny Cayman Brac tamin'ny fisokafan'ny jono sy fanjonoana an-tsambo.
Sidebar 2: Nanambara ny zoma mialoha ny praiminisitra
“Fantatsika rehetra ny ezaka goavana sy ny asa mafy izay efa nitohy nandritra ny herinandro maromaro mba hifehezana ny viriosy tsy hiparitaka eto amin'ny Nosintsika.
Faly aho milaza fa ny fikirizana dia mandoa dividends.
Ankoatry ny politika matanjaka napetraka, ny fahombiazantsika betsaka dia noho ny fanoloran-tena, ny maha-matihanina ary ny fanoloran-tenan'ny olona marobe izay miasa eo amin'ny laharana voalohany.
Anisan'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo mpamaly voalohany, serivisy manao fanamiana ary mpiasam-panjakana, ary koa mpiasan'ny fivarotana enta-mavesatra, orinasa tena ilaina ary maro hafa, izay manome serivisy na fampahalalana ilaina mba hanampiana antsika hijanona ho azo antoka ary hiasa hatrany ny nosintsika mandritra io fahasalamana manerantany krizy.
Zava-dehibe ny fandaniantsika fotoana hahafantarana ny laharam-pahamehanay sy ny mpiasa ilaina ary ampahafantaro azy ireo fa tena ankasitrahana ny asa mafy ataon'izy ireo sy ny fahafoizan-tenany.
Manomboka rahampitso sy isaky ny zoma, ny Radio Cayman dia manokana ampahany amin'ny seho Talk Today ho an'ireo mpiasan'ny laharana voalohany.
Te-hanasa ny besinimaro aho mba hiantso ny Radio Cayman manomboka amin'ny 1 ora sy sasany hariva ka hatramin'ny 30 hariva rahampitso mba hanao fisaorana an'ireo mpianakavin'ny fianakaviany sy ny namany noho ny fandraisan'anjaran'izy ireo teo amin'ny laharana voalohany, na koa mba hiresaka momba ny zavatra tsara zavatra niainany sy fifandraisan'izy ireo tamin'ny mpiasa eo aloha.
Ny laharana hiantsoana dia 1 800 534 8255 na 949 8037.
Azoko antoka fa ny antso ataonao dia hanome tosika lehibe ny tsirairay eo an-toerana ary hanampy amin'ny fitazomana azy ireo hatrany, noho izany azafady mba araraoty io fotoana io raha azonao atao.
Sidebar 1: Manazava ny fitsipika vaovao an'ny Cayman Brac COVID-19 ny Premier
Faly aho milaza fa ny Kabinetra dia nandany ny lalàna momba ny fisorohana, ny fifehezana ary ny famoretana ny lalàna Covid-19 (Cayman Brac), 2020. Hisy lalàna mifehy ireo anio hariva.th Mey dia navoaka indray ary tapitra ny 31st May 2020.
Ny haavon'ny famoretana ao Cayman Brac dia nidina hatramin'ny Level 3. Little Cayman dia akaiky ny Level 2 ary i Grand Cayman dia mijanona amin'ny Level 4.
Ity fanapahan-kevitra ity dia noraisina satria olona 400 na manodidina ny 32% an'ny Cayman Brac no notsapaina. Hatramin'izao dia olona iray ihany no nanaporofo fa miabo amin'ny COVID-19 ao amin'ny Brac.
Hisy ny fanovana amin'ny curfew sarotra. Hatramin'ity faran'ny herinandro ity, i Cayman Brac dia tsy hidina hidin-trano 24 henjana intsony amin'ny Alahady. Fa kosa hisy ny curfew manomboka amin'ny 8 pm-5 maraina 7 andro isan-kerinandro.
Ny toerana ho an'ny daholobe dia takiana mba hitazonana ireo protokol de distances sosialy farafahakeliny 6 metatra ary hanome serivisy ahafahana mitazona / ahatongavana toy izany ihany. Ny fisakafoanana any amin'ny faritra ivelan'ny trano fisakafoanana dia azo atao indray izao.
Ny fivoriana ampahibemaso dia hampitomboina olona 25 farafaharatsiny. Ny fivoriana ampahibemaso dia misy ny fialam-boly, fialam-boly na hetsika ara-panahy ao anatin'izany ireo izay karakarain'ny klioban'ny serivisy, fikambanana miorina amin'ny finoana, fikambanan'ny vondrom-piarahamonina, fikambanana sivika ary fikambanam-barotra. Midika izany fa afaka manao fivoriana izao ny fiangonana, ny klioban'ny serivisy ary ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina- saingy tsy maintsy mitazona ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina.
Ny fanaovana sarontava na saron-tarehy dia takiana amin'ireo izay ao an-trano amin'ny toerana be olona ary tsy afaka mitazona ny halaviran'ny 6 metatra amin'ny hafa.
Tahaka ny lalàna Little Cayman, ny dia an-tanety mankany Cayman Brac dia hofehezina ihany koa ary avela aorian'ny fampandrenesana ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny talen'ny raharaham-pitsaboana rahavavy Islands Islands.
Ka amin'ny teny azo ampiharina dia mipetraka ao Grand Cayman ianao ary maniry ny handeha ho any Cayman Brac, dia takiana amin'ny toerana mitokana mandritra ny 2 herinandro ianao amin'ny toerana iray nofaritan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Hotsapaina amin'ny COVID-19 ianao avy eo ary tsy maintsy mahazo fitiliana ratsy momba ilay virus. Rehefa mahazo ny valiny ratsy dia tsy maintsy mandeha eo noho eo sy mivantana any amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny alàlan'ny olona notendren'ny mpiasan'ny fahasalamana ianao. Ireo fepetra ireo dia natao hamerana ny mety fanafarana tranga vaovao amin'ny COVID-19 mankany Cayman Brac.
Nanapa-kevitra izahay fa hikatona ny bara mandra-pahatongan'ny 50% amin'ny mponina dia nanandrana ratsy ho an'ny COVID-19 na ny fahataperan'ireo lalàna vaovao. Ny fanirianay dia ny hitohizan'ny fitsapana ary mino izahay fa amin'ny 50% amin'ny mponina dia hanana famantarana mazava kokoa momba ny toe-javatra any Cayman Brac izahay.
Ireo mpiasam-panjakana raha tsy voatendry ho mpiasa tena ilaina dia hanohy hiasa lavitra avy any an-trano.
Izahay dia mitazona fameperana ny fitsidihana trano fandraisam-bahiny trano fonenana.
Ary angamba ny vaovao lehibe indrindra, ny jono sy ny sambo dia avela izao, kanefa mandritra ny fotoana misy dia misy fetra olona 2 isaky ny sambo.
Sidebar 3: Mampitandrina ny komisiona amin'ny hafainganam-pandeha, ny famandrihana tsy fahazoana mivezivezy
“Faly aho milaza fa mbola milamina ihany ny asan-jiolahy, misy ny heloka bevava vitsivitsy ary misy ny fihenjanana ataon'ireo andian-jatovo ao amin'ny distrikan'i West Bay izay niseho tamin'ny tranga nitifitra omaly alina (tsy nisy olona naratra) ary matotra fanafihana nahitana ny fampiasana machete androany maraina, ka naratra mafy teo amin'ny tanany.
Mandeha tsara ny famotopotorana ireo tranga roa ireo. Nosamborina ny iray ary antenaina fa hisy ny fisamborana faharoa amin'ny andro ho avy. Famaky trano vitsivitsy no voalaza fa tamin'ny herinandro lasa izay. Nasongadin'ity tranga ity fotsiny fa tsy lasa ny asan-jiolahy, fa nihena be tao anatin'ny 6 herinandro lasa. Voalaza fa hipoitra ny asan-jiolahy rehefa mandroso ny taona sisa tavela isika. Ambarako indray fa milamina ny asan-jiolahy ary amin'ny ankapobeny dia milamina ny zava-drehetra.
Ny curfew sarotra amin'ny ankabeazany dia mitohy mandeha tsara amin'ny Grand Cayman. Ho fantatrareo fa ny tsy fahazoana mivezivezy mafy ao Little Cayman dia nesorina tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ary avy eo ny praiminisitra dia hanambara ny fanalefahana ny fameperana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny Cayman Brac manomboka anio hariva. Misaraka manokana aho, manana ahiahy betsaka momba ny asa sy ny fandikana (ataon'ny olona sasany) momba ny fialofana amin'ny fitsipiky ny toerana (curfew malefaka) ao Grand Cayman.
Ny fivarotana lehibe, banky, tobin-dasantsy, fivarotam-panafody ary biraon'ny famindrana vola dia mandeha tsara avokoa. Voafehy tsara sy tantanana tsara izy ireo miaraka amina fandinihana ny protokolola lavitra.
Raha afaka naka fotoana fohy hiresahana momba ny tsy fahazoana mivezivezy matetika na fialofana amin'ny lalàna mifehy indrindra momba ny Grand Cayman aho:
Hatramin'ny 6 maraina androany maraina dia efa nisy 481 fampitandremana ho an'ny fanenjehana. Io dia nihena hatramin'ny 298 ny fanitsakitsahana ny Hard Curfew ary ny 184 ny fanitsakitsahana ny curfew malefaka.
Ankoatr'izay, eo anelanelan'ny 15 sy 23 Aprily, nisy 110 Tickets navoaka. (Vaky 592). Misy tapakila fanampiny ao amin'ny rafitra tsy tafiditra ao amin'ireo isa ireo.
Tao anatin'ny 7 andro lasa dia 31 ny tranga nahitana fanitsakitsahana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny Grand Cayman, izay nahatonga ny fampitandremana momba ny fanenjehana ho an'ny olona 60. Ireo dia hita tao amin'ny George Town (17), West Bay (8), Bodden Town (2), East End (3), North Side (1). Anisan'izany ny:
Tranga 8 izay nanitsahan'ny olona ny ora tsy azo ihodivirana amin'ny alàlan'ny lomano, fanjonoana na snorkeling. Ny tranga lehibe indrindra dia ny tamin'ny 4th tamin'ny Mey raha nisy vondron'olona 6 tratra snorkeling tao amin'ny distrikan'i West Bay.
Tranga 2 nisehoan'ny olona tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alàlan'ny asa aman-draharaha tsy misy fahazoan-dàlana. Nisy tranga iray tamin'io 5 ioth tamin'ny Mey teo amin'ny Shedden Road, George Town izay nahitan'ny manamboninahitra lehilahy iray nihazona fivarotana mpanety niaraka tamin'ny mpanjifa 3 niara-nipetraka tao anatiny.
Tranga 2 izay tsy noraharahan'ny vondrona large (olona 7+) ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Anisan'izany ny tranga iray omaly izay nanatrehan'ny manamboninahitra ilay toerana ary nandinika lehilahy 9 nilalao Domino tao aorinan'ny trano misy fahazoan-dàlana ao GT, dia nampandrenesina avokoa izy ireo noho ny fanenjehana azy ireo.
Ny Lehiben'ny mpitsabo anay, Dr. Lee dia nanasongadina hatrany ny loza mety hitranga amin'ny virus COVID 19. Nametraka hatrany ny tanjon'ny lalàna mifehy azy izy mba hiarovana ny viriosy sy hiarovana ny mponina ao amin'ny Nosy Cayman. Ny tatitra momba ny vaovao isan'andro sy manerantany ary nasionaly dia mametraka ny risika mifandraika amin'ilay viriosy ary sarotra ny mahita ny fomba mety handikan'ny olona tsirairay ny loza mety hitranga amin'ny fiarahamonina eto amin'ny Nosy Cayman.
Miaraka amin'ny fanalefahana tsimoramora ny famerana ny fiandohan'ity herinandro ity ny olona sasany dia miasa mafy mba hialana amin'ny tanjon'ny lalàna mifehy tena amin'ny fandikana ny fandikan-teny, miodina amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy. Ity karazana fitondran-tena ity dia mametraka ny ankamaroan'ny mponina amin'ny risika bebe kokoa ary manimba ny tanjona sy ny tanjon'ny fitsipika izay miaro indrindra ny vondrom-piarahamonina sy mamonjy ain'olona.
Ny fanamby ho fiarovana ny fiarahamonina dia aseho amin'ny alàlan'ny volan'ny fifamoivoizana manodidina an'i Grand Cayman, izay mazava ho azy. Tsy lavitra ny volan'ny fifamoivoizana alohan'ny kobaid. Mampalahelo fa ny fanalefahana fameperana dia toa fotoana fanaovan-jiro ho an'ny olona sasany izay nandika ny fanalefahana ho fahazoan-dàlana hamerenany hetsika sy hetsika feno manerana an'i Grand Cayman.
Ny fahombiazantsika hatreto amin'ny fiatrehana ny COVID 19 dia vokatry ny marimaritra iraisana sy ny fandeferana, izay nitondra antsika hatreto ary nitondra valiny tena tsara ary isika rehetra eto amin'ity efitrano ity dia mino fa eo am-pitoerana ny faran'ny farany, raha azontsika atao izany. marina.
Saingy miady mafy izahay hahazo olona vitsy an'isa hanaraka ny lalàna mifehy ary izany dia mitaky ahy amin'ny maha Komisiona an'ny polisy hitarika ny fampiharana henjana kokoa ny lalàna mba hiarovana ny vondrom-piarahamonintsika sy hamonjy ain'olona. Ireo olona mandika ny lalàna mifehy ny fiarovana ny filan'ny olona manara-dalàna ary mila mandanjalanja izany.
Nilaza ny praiminisitra omaly momba ny vondron'ireo mpiasa an-tanety mandeha ao aorian'ny kamio misokatra, tsy lavitra ny fiaraha-monina ary tsy mitondra ny taratasy takiana, nilaza ihany koa izy fa hofoanana ny fanavotana ny mpampiasa tsy manara-dalàna. Nomeko torolàlana ny mpiasako mba hiantohana ny tatitra rehetra any amin'ireo manam-pahefana mahefa miaraka amin'ny fikasana hanafoana ny famotsorana ireo mpampiasa sy mpiasa tsy manara-dalàna. Raha misy ny fandikan-dalàna hita dia nandidy aho fa ny olona ao anaty fiara dia hampitandremana ho enjehina ary raha misy mpiasa mitsangantsangana tsy misy taratasy fanalahidy takiana dia hitady ny fanenjehana amin'ny mpampiasa izahay noho ny tsy fanarahan'izy ireo ny fepetra apetraky ny navoaka ny fanavotana.
Mbola olana hatrany ny fandehanana mafy amin'ny arabe ataontsika, ao anatin'izany ny hafainganan'ny mpamily amin'ny fizarana sakafo, indrindra amin'ny alina, tsy misy ankanavaka ny hafainganana. Te-haka fotoana kely aho hamakiana ny mailaka nalefan'ny mpikambana iray tamiko avy amin'ny vondrom-piarahamonina voakasik'izany amin'ny zava-mitranga, eny amin'ny lalantsika. Ny tanjon'ny polisy amin'ny fampiharana ny lalàna dia ny hisian'ny rariny sy mifandanja amin'ny fomba fanatonantsika, saingy miha sarotra hatrany izany satria misy olona mitady handika ny lalàna.
Fiambenana malefaka na fialofana amin'ny fitsipiky ny toerana ao amin'ny Grand Cayman mijanona eo anelanelan'ny ora an'ny 5 maraina sy 8 alina isan'andro alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy. Ny trano fialokalofana vaovao ho an'ny Cayman Brac dia halefa amin'ny takariva hariva na rahampitso ary hiresaka izany ny praiminisitra anio.
Fitsidihana mafy na fanidiana hidy feno, mitahiry ho an'ny mpiasa tena ilaina tsy voatanisa dia mijanona ho miasa ao amin'ny GC sy CB eo anelanelan'ny adin'ny 8 alina ka hatramin'ny 5 maraina alina Alatsinainy ka hatramin'ny alahady.
Ny vanim-potoana fanaovana fanatanjahan-tena tsy mihoatra ny 90 minitra dia avela eo anelanelan'ny ora an'ny 5.15 maraina sy 7 hariva isan'andro Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Tsy avela handeha ny fotoana fanazaran-tena Alahady mandritra ny fe-potoana tsy fahazoana mivezivezy. Tsy misy ifandraisany amin'i Grand Cayman izany satria nesorina tao amin'ny CB sy LC ireo fameperana ireo.
Amin'ny Alahady 10 Mey 2020 ho avy izao dia hiasa ho toy ny fe-potoana famerenanana mandritra ny 24 ora miaraka amin'ny hidim-bidy feno. Tsy misy olona hafa ankoatry ny mpiasan'ny serivisy tena ilaina voadidy afa-maina avela hiala ny tranony amin'ny alahady, na inona na inona antony. Tsy avela alahady ny fotoana fanaovana fanatanjahan-tena eny amin'ny toeram-bahoaka. Izany dia mifandraika amin'ny Grand Cayman ihany. Ao amin'ny Cayman Brac dia hisy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina eo anelanelan'ny adin'ny 8 hariva ka hatramin'ny 5 maraina amin'ity alahady ity.
Ny fe-potoana feno 24 ora tsy azo ihodivirana rehefa mifandray amin'ny fidirana amoron-dranomasina amin'ny torapasika am-pahibemaso ao Grand Cayman dia mijanona hatramin'ny zoma 15 Mey 2020 amin'ny 5 maraina - midika izany tsy misy fidirana amin'ny torapasika am-bahoaka amin'ny GC amin'ny fotoana rehetra hatramin'ny zoma 15 Mey 2020 amin'ny 5 maraina. Izany dia mandrara ny olona tsy hiditra, handeha, milomano, snorkeling, manjono na manao karazana hetsika an-dranomasina amin'ny morontsiraka rehetra amin'ny Grand Cayman. Nesorina tamin'ny Cayman Brac io fameperana io anio hariva. ”
Ampahatsiahiviko ny olon-drehetra fa ny fanitsakitsahana didim-pitsarana henjana dia ny fandikan-dalàna mitentina 3,000 XNUMX KYD $ ary fanagadrana mandritra ny herintaona, na izy roa.
Nanome torolàlana momba ny fampiharana avo lenta aho mandritra ny faran'ny herinandro ho avy ary mangataka anao aho noho ny fiaraha-miasa matotra rehefa miara-miaro ny vondrom-piarahamoninay sy mamonjy aina.
Nanitatra hatramin'ny 15 Jona ny fandraràna ny dia ataon'ny EU